Taariikhda My Butros » Katz on Dogs : A Guide caadiga ah Tababarka iyo Living la Dogs
Katz on Dogs : A Guide caadiga ah Tababarka iyo Living la Dogs
Last updated: Dec. 08 2019 | 9 min akhri
Waa milkiilayaasha eey la filayo su'aasha waa in marka hore weydiisaa, laga yaabee ugu muhiimsan ee nolosha qof ee la eey:
Go'aannada ugu muhiimsan oo ku saabsan nolosheena wata eeyo ayaa inta badan la sameeyo ka hor waxaan keenaynaa mid guriga. In qofka eey in America waa disturbingly
fudud. Waxaad sheeegan karaa online, heli buu lahaa, ama qaadato mid ka mid ah muqisho ka kid qaar ka mid ah waxaa bixiya ka baxsan suuqa weyn (Anigu taas ma kula talin lahaa). Waxaad
laga yaabaa in soo gaarto wiifto ah halka socodka baxay ama baabuur-wadidda. Dadka qaar ayaa dooni eeyaha sababo la taaban karo ayaa dhagaxayga weyn-adag: ammaanka, ugaarsiga, therapy, search-iyo-samatabbixinta. Laakiin inta badan oo naga mid ah, dhihi cilmi nafsiga iyo behaviorists, leeyihiin ka adag ujeedooyinkooda dareenka iyo maskaxdana.
WAA MAXAY SABABTA baan doonayaa in eey?
The aadanuhu ay ka badan dhibaato ay ku xirmaan mid kale, oo aad bay u noqon eeyaha (iyo xayawaanka kale) si ay u buuxiyaan qaar ka mid ah meelihii jajabnaa. Waxaan u muuqdaan in ay u baahan yihiin si ay u jecel yihiin iyo in la jecel yahay in siyaabo wax aanay dhib, daahir ah, oo lagu xiray.
Casriga America waa, siyaabo badan, burbursan ah, bulshada fuqdo. Qoysaska Our kordhiyay guurtay; waxaan inta badan ma yaqaanaan aynu jaarka nahay ee; badan oo inaga mid dalool ilaa habeenkii, dhaygag ka mid noocee ah shaashadda ama mid kale. Furriinka waa mid caadi ah. Work waxa uu noqday deganayn, hubin badan, inta badan aan fiicnayn. Dad badan ayaa waxay u muuqdaan in ay u fududahay in ay ku noolaadaan oo ay is dhexgalaan eeyo badan oo leh hal kale, iyo si bonds u dhexeeya dadka iyo eeyaha koraan si tartiib ah xoog.
Laakiin horumarkaas ee xiriirka ka mid ah kuwan laba nooc oo ah mid ka mid dhinac. Eeyaha badan ayaa si wanaagsan ugu adeega by aadanuhu’ lifaaqa Galinaynaa, laakiin eeyaha aysan u samayn karaa doorashooyin la mid ah. Waxaa baahida aadanaha in dhisnaa amarkooda, jacaylka canine weyn.
Aadanuhu waxay go'aansadeen in ay soo eeyaha galay xarunta noloshooda. Waayo, kulli fussing ku saabsan xuquuqda xoolaha, eeyaha midna ma haysto. Iyagu ma heli inaad gaadhid go'aamo ku macaamiisha. Waxay ku tiirsan na on wax walba oo ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan. Waxay kuma hadli karaan dib; waxay leeyihiin ma waxaad dhahdaa ku saabsan bay'ada ama mustaqbalka.
Inkasta oo eeyaha ayaa ka caawiyey oo la soo shaqeeyay aadanaha oo kumanaan sano, waa kaliya in labaatankii sano ee ugu danbeeyay in ay haatan ku iman in loo arkaa in uu yahay wax kale oo aan ahayn (laga yaabee in ka badan) xoolaha. Butros-haynta ahaa kuwa Hodanka ah dhexdooda caana oo awood leh ee Musefeni, Qoraallada Hagidda ethicist xoolaha James Serpell in Xayawaanka kitaabka iyo Society Human: Bedelaada Ra'yiga, laakiin taasi kama aysan u bartaan ixtiraam baahsan ilaa goor dambe oo qarnigii toddoba, Muddo of xamaasad kordhaya ee saynis iyo taariikh dabiiciga ah iyo walaac isa soo taraya ee xoolaha’ welfare. Tan iyo markaas, lifaaqa eeyaha ayaa si weyn u xoojiyey. Waxaan aadanuhu marna u dhaw noocyada kale. Waxaan ku qaataan tobanaan balaayiin dollar ah oo ku saabsan daryeelkooda, quudinta, iyo dheeldheel; siiso magacyada aadanaha; iyaga ula hadasho sida haddii ay noo fahmi karo; aaminsannahay in aannu naqaan waxa ay ka noo sheegaya in soo laabashada.
Emotionalism Tani waxay badanaa dhegaya eeyaha ee baahida iyo doonayo. Waa mid caadi ah oo hadda, inkasta oo ay noqon lahaayeen kuwa naxdin leh xitaa qarni ka hor, si ay u maqlaan dadka dhihi aan raali galin ama ay ceeb ku tahay in ay jecel yihiin eeyaha ay ka badan waxay jecel yihiin dadka ugu badan, in ay arkaan eeyaha ay sida xubno ka mid ah qoyskooda, in ay qarsan dhibaatooyin iyo siraha ugu saaxiib ay eeyaha ay, kuwaas oo u badan yihiin daacad iyo waxgarasho badnahay waalidiinta, Marwooyinkoodu, kuwii ku caashaqi jiray, ama saaxiibadaa. Joogista dhowr maalmood ee xafiiska dhaqtarka xoolaha oo ka mid ah aan cilmi buug, Waan la yaabay in hal qof oo dumar maqlaan rabitaanka kale ka dib, “Fiiri, Doctor, Waxaan ku noolaan karaa adiga oo aan ninkayga, laakiin aad heysato si loo badbaadiyo eey this!” Laakiin vets ii sheeg iyaguna way maqli waqtiga oo dhan.
Iyo ma ahan oo keliya ka dumarka. Cilmi Behavioral muujinaysaa in dumarku jecel eyda qayb sababtoo ah waxa ay u muuqdaan kuwo dareen ahaan taageero ah weli qalafsan, fahmi karaan milkiilayaasha ay hab qoto dheer inkastoo wordless. Dhanka kale, nin jecel eeyaha, sababtoo ah waxay yihiin PALs kaamil ah, faraxsan in ay tagaan meelaha iyo inaan sameeyo waxyaalo, laakiin in la qabto ama wada hadalka baahida awoodin. Like ama ha, eyda noo’ upbringings tarjumaan u gaar ah. Waxaan u muuqdaan in lagu daweeyo eyda noo habka aan laga daweeyey, ama sida aan u rabto aan 'd ahaa. Si kastaba ha ahaatee, soohan noo gaarka ah si weyn u qaabaynta dabeecadaha ku saabsan eeyaha iyo siyaabaha aan tareenka iyo xiriirka iyaga la.
Tani inta badan waxa weeye geedi socod miyir. Milkiilayaasha tiro yar badan oo is-wacyiga keenaan xidhiidhka ay canine ama milicsato qoysaskooda markay qaylin at eeyaha ay u yimaadaan, ama Doodii iyaga sida haddii ay garan. Mid ka mid ah kalkaaliyaha dugsiga, waan ogahay habeen walba goolka iyada eey dhegaha markay guriga yimid, qeyliyaa, “Ha aad i jeceshihiin? Waxaan aad Hooyo macaan ahay?” Waxay la yaabay sababta eey isku dayay in uu ordo marka la socod.
Sidaas la sugay si loo helo eey noqoto muhiim ah, haddii aad ka welwelsan tahay in ay welfare iyo rabaan xidhiidh wanaagsan. Ma aad jawaab su'aasha sababta-a-eey in ay sahlantahay in la raadsan wehel ka xayawaan ku tiirsan badan ka qof? Ma waxaad rabtaa in eey sababta oo ah fariimaha subliminal ka TV oo movies? Ma waxaad ka badan barbaro in badbaadinta abuuray oo badan si ay tababar oo waxaa iyaga la nool?
Ha aan edbiyo siyaabo naloo edbiyo, weydiiso heerarka addeecidda iyo kaamil ah dalbaday naga mid ah, dhaleecayntooda in codadka iyo erayada aan maqlay? Ma waxaan reenacting ruwaayado qoyska jir, isku dayaya in ay daweeyaan dhaawacyada? Waxaan si daacad ah u oran karaa in aan ama qof kale in qoyskiina uu ogol yahay in ay qaataan mas'uuliyadda dareenka for eey, ma ahan oo keliya jecel laakiin tababar iyo waanada u?
Qof dumar ah oo loo magacaabay Susan waxay ii sheegtay doonayay eey maxaa yeelay, iyadu waxay dareemeen ammaan ahayn in kana a, xaafadda sabool in Elizabeth, New Jersey. Sidaas daraaddeed waxay la helay mastiff English ah si aad u weyn in mulkiiluhu ugu dhakhsaha badan yeellay iyada isaga iska siiyo, markaas adhijir German magacaabay Thunder. Eeygu uusan si wanaagsan u ilaalin guriga, amraya albaabka hore markii shisheeyayaashuna way by. Laakiin tan iyo Susan, oo ka shaqeeya sida la kaari New Jersey Transit, qirtay iyadu waa tababaraha sabool ah iyadoo ay xiiso u yar in eyga shaqeeya, ayay u leedahay in ay xirto Thunder hoose ah markii saaxiibo ama qaraabo booqo. Iyada 's guriga ku soo noqon si aad u hesho gogo' oo xad-dhaaf ah ee mail lgeeyaa; eyga la fahmi arkaa baqshadaha soo socda iyada oo booska albaabka sida dhibataato. 'Waxay s kale oo lagu bedelo albaabada xoqo iyo dariishadaha.
By hadda, Thunder oo miisaan sagaashan pounds oo uu jiidayo Susan dhan in ka badan maraan marka ay isaga qaato. The deriska iyo carruurtooda ayaa waxaa cabsi isaga of, inkasta oo uu marna dhab qaniino ama wax yeelay qof. Eeygu uma muuqato dagaal badan aad u badan sida ogsoon yahay; inuu sameynayo shaqada uu kiraystay si ay u sameeyaan, dhibane uu tayadaada. Laakiin Susan, iyada jecel yahay Thunder oo sheegay, qirtay in ay marnaba run ahaantii doonayey eey ay aawadaa. Waxay u badan tahay in ay qaataan koorsada is-difaaca ama loo yaqaan shirkad ammaanka-dhaan halkii. “Waxa ay noqon doontaa jaban mustaqbalka fog, oo fudud.”
Fahamka sababaha aan dooneyno eey u tahay udub dhexaad doorashada kuwa xaq u, iyaga oo si fiican loo tababaro, ku nool iyaga la illaawi karo. In badan oo aan ka garan nafteenna, doorasho ka fiican waxaan u badan tahay inay sameeyaan labada noocyada.
Marka aad ka fikirto waxa ku saabsan, aad u badan tahay in la ogaado badan oo dadka ka caban in eeyaha ay aad u firfircoon ama aad u yah, sidoo kale xiiso u ceyrsaneysa dabagaalaha ama aad u caataysnaa in ay yimaadaan marka loo yaqaan, aad u ilaaliya ee guriga ama si nonthreatening lahaa waxay kaa caawin fuliyaan waxyaabaha qiimaha leh ee. In kasta oo eey badanaa eedda, sida inta badan ma milkiilaha sida dhigay doorashada nasiib ama jirran-tixgeliyaa. Sidaas darteed, eyga waa cadaadis in ay wax kale oo aan ahayn waxa uu yahay, halka aadanaha oo ay leeyihiin gacmahooda buuxa. Iyada oo fikirka yar iyo cilmi-, nolosha eeyaha iyo dadka ay noqon kartaa wax badan ka fudud oo ka qanco. Laakiin taasi waxay u baahan yihiin faham qaar ka mid ah cilmi nafsiga gaar ah iyo dareenka, qaar waxay u maleeyeen ku saabsan halka aan nolosheena gaarka ah iyo sida eyda noo haboon in. Jim, ugaadhsade ku nool ii soo dhowaan rfumaysnahay New York, dhawraa saddex beagles in guri eey u badan 360 ka maalmood ee sanadka. Waxay soo gudboonaada dhowr saacadood saaka on kale shan maalmood si ay ula socdaan ciyaarta. Waxay bixiyaan wax badan oo ka mid ah wakhtiga sugitaanka, laakiin marka ay timaadana, ay ka mid ah guri eey oo duurka dhexdiisa toogtaan. “Waxay yihiin eeyaha weyn,” ayaa sheegay in Jim, oo aan xataa u magacaabay.
Ma jecla kuwa iyaga ka qabo? Mar aan waydiiyay. “Marka ay shaqooyinkooda aan sameeyo,” ahaa uu jawaab. Waxaan dareemayaa awtomatik xumahay eeyaha marka waxaan ka eryi by, gaar ahaan marka aan ka fiirsan eeyaha aniga ii gaar ah’ noloshooda pampered, laakiin eeyaha Jim ee, halka ay weyn tahay, uma muuqato in ay ogaadaan waxa ay ku waayi. Dhammaantoodna waa eeyo Ma noolaan karaan sida in. Laakiin beagles Jim ayaa muujiyaan waafajinta u naxdin leh oo ah eeyaha. Waxay halkaas tahay in ay soo ugaarsadaan, muddo. Jim leeyahay xaas iyo afar carruur ah inay ka kii uu Nagi, oo uu mashquul ku adag uu dhismaha; ma u baahno eeyaha in ay hiwaayadiisa ama ku kalsoon tahay inuu. Marka maalin, waxa uu madax ka soo baxay in ay guri eey la baaldi hilibka iyo haraaga cuntada iyo qofkaasina waxyaabaha ku galay guri eey ka. Ugu Christmas, uu ku darayaa baaldi buskud. Waxay heli dhan darbo ay, iyo arko xoolaha haddii ay dilooday. Beagles ayaa marna ahaa gudaha gurigiisa. Wuxuu ku hadlaa iyaga ku kibreen oo si qurux, laakiin ay tahay qalab, sida daloolin ama qoriga cusub, dadka aan wax yar, xitaa ma run ahaantii xayawaankaaga in dareenka casriga ah. Laakiin weliba eeyahu waxay u muuqdaan kuwo ka kooban yahay iyo caafimaad leh. Jim ogyahay si hufan sababta inuu doonayo inuu iyaga. Waxay fahmaan sharciyo fudud oo, tan iyo eeyo ka maqan wacyi aadanaha ee dhererka waqtiga, Ma aqaano inta ay tagaan dhexeeya raadinta. Waxaa laga yaabaa in aanay jid dad badan oo naga mid ahi waxay doonayaan in ay leeyihiin eeyaha, laakiin uu la caddeeyo oo ku saabsan noocyada kala duwan ee eeyaha inuu doonayo iyo sababta ay u muuqataa in ay si fiican u wada shaqeyn dadka ku lug leh.
Hadana waxaa jira Andrea, artist ah oo ku nool beer konton-acre ah ee Vermont. Sababo adag oo kala duwan, in ay ka quusan fikrad dadka, guurka, qoys; halkii, ayay baadhay kooxda samatabbixinta collie ah. Waxay, aad, fahamsan yahay dhab ahaan sababta ay doonaysay eey, iyo debaajiga in ay ka sameeyay kuweed leh u muuqataa in ay iyaga sameeyaan labada faraxsan.
“Anigu ma aan nasiib leh xiriirka, ugu yaraan aan weli,” ayay tiri. “Laakiin faqaan oo aan midba midka kale Khayrja. Waxaan leeyahay xiiso aad u badan iyada oo la, oo iyana waxay igu siinaysaa raaxo badan iyo jacaylka. Waxaan rajeynayaa in ay 's biriijka in ay xiriir kale, laakiin haddii iyadu ma aha, Waxaan noqon doonaa caadi.”
Ma aha Iguma Haboona inaan Dhaho iyo runta aan run ahaantii ma go'aamin karo in Andrea dhigay nin xigmad leh amase caafimaad qaba doorasho. Laakiin iyadu way u maleeyeen ku eegtay ujeedooyinkooda iyada, ku saabsan sida eey ula qabsan doono nolosheeda, oo waxay samaysay go'aan loo tixgeliyaa.
“Maadaama aan kid uu la tuugsanaysa mid” waa, Dhanka kale, inta badan sabab la tuhunsan yahay si ay u bartaan xayawaanka ah. Waa Lama ogala caadi ah, laakiin eeyaha iibsaday sida lama filaan Christmas ee dalbanaya in caruurta inta badan waxay leeyihiin waqti xunxunna waxaa ka mid ah. Balanqaadyo is dhigay oo la halmaamo; xiisaha danbow cusub ee, markaas wanes.
Ma ahan mar walba. Deriskaaga A iyo toban-sano jir ah anigaa of weydiistay retriever dahab ah sanadkii la soo dhaafay ee Christmas iyo waalidka oo la isku raacay, shardi ah in Jeremy qaado oo mas'uul ka ah. Waxaa laga yaabaa in ay kalsooni ku qabay in uu si dhab ah sababtoo ah waxa uu jeclaan lahaa hore u cadeeyay ballan qaadkii uu sameeyay quudinta uu kalluunka iyo nadiifinta baxay baqashada hamster.
Haddii ay dhacdo wax kasta oo, Jeremy sameeyo is ogow of Clancy. Iskuulka ka hor iyo ka dib markii uu isaga Socon, jaqsiinayso isaga, cadaydo isaga, isaga qaadataa inay fasallada tababarka Saturday kasta. Maalin kasta oo iskuulka ka dib, Jeremy iyo Clancy wada tababaraan. Eeygu ayaa bartay in aan nimaadno marka loo yaqaan, si ay u fadhiisan, joogo, oo ay u jiifsato on amarka. Dadka meelaha miyiga ah oo aqoon u leh barnaamijyada 4-H og sida caafimaad leh waxay noqon kartaa carruurta in ay qaataan mas'uuliyadda xoolaha. Dadka ku jira ilmaha- iyo meesha xukunka inta badan u muuqataa agagaarkeedii ku waalan eey u noqon, ardaaga yar, eyga weyn ay og yihiin sida aan caadi ahayn u yahay. Wixii Jeremy, helitaanka eey u muuqataa sida wax u wanaagsan; ayuu hadalkayga xajiyeen, ama laga yaabee in waalidiinta uu qaaday tallaabo aan caadi ahayn ee ku adkeystey in uu u dhawraan. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan aragnay, caruurta yar isaga oo kale. Waalidiinta, Digtoonaadeen: qof reerka ah in uu qaado masuuliyada asaasiga ah eey, iyo haddii carruurta aan samayn, Hooyo ama aabe uu u faragalisaa.
Waalidiinta inta badan ku siin carruurta wax ay ay u arkaan in ay yihiin wanaagsan for iyaga teleefoonada gacanta, kombiyuutarada, eeyaha fikirka badan oo ku saabsan sida waxyaalahan waxaa loo isticmaali doonaa ama loola dhaqmo ka dib iibka aan.
Sidaas Maxaad u doonaysaan eey?
Haddii ay jawaabta, in ka qayb, loo arkayo in taariikh shucuurta qalafsan (sida dhab ahaan waa kiiska ila), hubi in aad fahamto oo aad ka fikirto uun waxa aad ka codsanaynaa of xayawaanka ah. Inkastoo ay caado ah eeyaha anthropomorphizing noo, iyagu ma ay garan waxyaaluhuu kala aannu dib iyo fikirka aan suurto gal qabsan karaa Gudigga doorka dareenka waxaan mar mar waydiisan in la buuxiyo. Waxay xitaa ma amiably u dhaqmi karo by sharaxyo ah haddii aan si fiican loo doortay, dhaqmaa, oo tababaran. Tan iyo wixii aan filaynay inta badan waa wax badan oo aad u sarreeya, waxaan si sahlan u niyad ama cadhoodaa. Waxaa la cadeeyo in aan abuuro dhibaato Eyga biters, Dadka, barkers, neurotics u baahan ee dawooyinka lidka diiqadda. Tani waxay dhacdaa qayb ahaan sababtoo ah dad badan ka heli eeyaha qaldan ee wakhtiyada kale khalad ah sababaha qaldan. Waxaa jira qayb ka macnawi qaadashada on eey. In kastoo ay yihiin ma awood u geedi socodka fikradeed ee heerka sare-, eeyaha Dhab qabto shucuur. Waxay la kulmaan xanuun iyo khasaaro, Cabsi iyo Jacayl. Tani ayaa iyaga iyo xayawaanka kale ee la siiyay ka mid ah dadka damiirka qaar Istaagi moral. Ma laga yaabaa in iyaga u samaysaa wax u Dhigma oo carruurta, laakiin waxa nagu khasbin in aad ka fikirto sida aan u daweeyo. Laakiin eey kasta ma aha ee qof walba. Ma aqbali sii kordhaya, siyaasad fikradda kaxayn in eey kasta waa inay si siman ugu mudan ee samatabbixinta, in dhammaan eeyaha waa muhiimad si isku mid ah in ay waafajinta in our kacsan, buuq badan, deegaanka aadanaha litigious. Ma heli in ay yihiin kuwa run. Dogs yihiin waxey ubadneyd mid idiosyncratic, kala duwan xan ah oo ku xidhan sirdoonka, genetics, waayo-aragnimo qashinka, daaweynta, iyo deegaanka. Qaar ka mid yihiin genial oo xawaal, carbiyo si loogu dabciga, iyo qaar ka mid ah ay yihiin rabshad, Falkan oo loo tababaray in ay gabaad ama dagaalka. Tiro yar oo naga mid ah waxay leeyihiin xirfado tababar ama waqti ay ku bedeli dhan ah dabeecadaha kuwa. Doorasho khalad ah eey caddeyn karo qarow aad u, qoyskaaga, iyo bulshadaada; mid ka mid sax ah, farxad ah.
Eeyaha qaarkood waxay u baahan inay ka shaqeeyaan, qaar ka mid ah ma samayn; qaar ka qarin doonaa onkod, halka kuwa kale oo aan xitaa dareemayn doonaa; qaar ka mid ah dadka nacaybka ee koofiyadaha iyo baaskiilada ceyrsashada kuwa kale. Weligaaba ma ogaan kartid, kuwaas oo oddities ka hor; dhamaan sabab u sii taxaddar leh u waddo.